Vaovao - Atsaharo ny filaharan'ny Scaffolding
Scaffold amin'ny peratra Tokony hatsangana ary horavana amin'ny filaharana iray. Misy olona mieritreritra fa ny fananganana dia mila tanterahina amin'ny filaharana, ary tsy maninona izany rehefa rava, dia azo foanana tampoka, raha ny marina, ny fandravana ny torolalana takiana ihany koa ny hanamafisana ny filaharana, ny fahazoana tsara fotsiny ny famongorana ny filaharan'ny scaffold mba hahatratrarana indroa ny valiny amin'ny antsasaky ny ezaka.
(1) esory aloha ny fantsom-pokontany ambony sy ny vatan-tsipika avy eo amin'ny fehin-kibo, ary avy eo esory ny takelaka tongotra (na zorony mitsivalana) sy ny tohatra, ary esory avy eo ny vongan-trandrika sy ny hety.
(2) Manomboka amin'ny sisin-dàlana ambony, esory ny kofehin'ny hazo fijaliana, ary esory miaraka amin'ny fatorana rindrina ambony sy ny scaffold amin'ny endriny ambony.
(3) Tohizo ny fanesorana ny scaffold an'ny frame ary Accessories amin'ny dingana faharoa. Ny haavon'ny scaffold dia tsy tokony hihoatra ny dingana telo, raha tsy izany dia hampiana fatorana vonjimaika.
(4) mandrava mitohy synchronous down fandravana. Ho an'ny fatorana rindrina, latabatra boribory lava ary hety ny fanohanana, dia esorina izy ireo aorian'ny fandravana ny scaffold amin'ny zoro mifandraika amin'izany.
(5) esory ny scaffold mahazatra sy ambany ary ireo faritra hafa.
(6) esory ny fotony ary esory ny takelaka sy ny sakana.